> Resource > Samsung > 2 Siyaabaha Bedelka Music inay Galaxy Note 2
Sidee baad u wareejiyo music in Galaxy Note 2? Waxaad u garan karaa su'aal doqon ah, sababtoo ah ma fudud waxay noqon kartaa mid si ay u gudbiyaan music on your computer waa in la cable USB ah. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar wax u tagaan adiga. Maxaa dhacaya haddii aad leedahay cable USB dhow dahay lahayn? Ama waxa haddii music aad ugu jeceshahay waa kaliya ee aad taleefan jir, sida iPhone 4? Xaaladaha sidan oo kale ahi, waxa aad samayn karto si ay u dhamaystiraan iibsiga music ah? In this article, waxaan jeclaan lahaa inaan idin la wadaagno qaar ka mid ah talooyin ku saabsan suuqa kala iibsiga music ka computer, Lugood, iDevice, Nokia ama telefoonka Android jir ah u Galaxy S3.
Qaybta 1. Transfer music ka computer si Galaxy Note 2
Qaybta 2. Nuqul music telefoonka ama kiniin in Galaxy Note 2
Sida aan kor ku soo sheegnay, marka aad cable USB ah, aad ka computer si ay Samsung Galaxy S3 wareejin karaan music aan ku xirid ah. Connect telefoonka in kombiyuutarka. Ka dib markii la ogaado, disk dibadda adag ee Fiiro Galaxy 2 muuqataa. Tag, oo furo disk iyo dooran gal ah si loo badbaadiyo music ah. Markaas, nuqul oo si galka paste heeso aad ugu jeceshahay.
Maxaad samayn kartaa marka cable USB ma la heli karaa? Xilligan la joogo, tababare Android caawinaad bixin doonaan. Halkan waa mid wanaagsan oo loo magacaabay Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Waxaa karin iibsiga music kaliya ka computer, Lugood iyo Android phone in Galaxy Note 2 ama cable USB ah oo aan, laakiin ha waxaad kala soo bixi iyo music kala iibsiga ka websites in Note Galaxy 2. hanuun soo socda aad ku tusi doonaa tallaabooyinka fudud oo ku saabsan Samsung Fiiro Galaxy 2 music kala iibsiga.
Fiiro gaar ah: The Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music in Galaxy Note 2 via cable USB.
Tallaabada 1. Ku rakib app MobileGo ku saabsan Samsung Galaxy Note 2
Dadka isticmaala WiFi, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo app MobileGo aad Note Samsung Galaxy 2. marka la rakibo, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka desktop MobileGo for Android si sax ah.
Fiiro gaar ah: Guji halkan >> marka aad rabto in aad si toos ah u dejisan iyo rakibi app MobileGo on Galaxy Note 2.
Tallaabada 2. Isku aad Samsung Galaxy Note 2 ilaa MobileGo
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka desktop MobileGo for Android. On aad Samsung Galaxy Note 2, jaftaa MobileGo, iyo lambarka sirta QR ku saabsan suuqa kala xiriir kombiyuutarka ah. Markii barnaamijka desktop MobileGo for Android ogaadaa Galaxy Note 2, waxaa muujin doonaa telefoonka uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Download iyo music wareejiyo Samsung Galaxy Note 2
Tag geeska bidix ee kore ee suuqa, guji Wontube MP3 Download . Raadi heeso aad u jecel oo iyaga ka soo dejisan. Ama, guji iskutallaabta. In wada hadal ka soo Baxday, imput ka URL iyo magaca website ee ku darto websites aad jeceshahay in MobileGo for Android. Ka dib markii ay soo bixi, heesta waxaa si toos ah badbaadi doona Galaxy Note 2.
2. Transfer music ka Lugood in Galaxy Note 2
Dhinaca khadka hoose, guji Import Lugood Music . Hubi playlists aad rabto iyo riix OK si ay u dajiyaan.
3. Transfer music inay Fiiro 2 kombiyuutar
Si aad u dajiyaan music kombiyuutar, waxaad riixi kartaa Music khaanadda bidix. In uu furmo suuqa music on xaq ah, guji saddexagalka hoos Add > dar File / dar Folder / Import Lugood playlist inay dajiyaan music in Galaxy Note 2.
Fiiro gaar ah: Waxaad kaloo isticmaali kartaa MobileGo for Android inay ka telefoonka ah Android wareejiyo music inay Fiiro Galaxy 2. Connect phone kale Android inay MobileGo ah. Markaas, qaybta phone Android, guji Music si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka ay. Markaas, music wareejiyo si Galaxy Note 2.
Si music telefoonka socda macruufka, Symian ama Android lagu wareejiyo, waxaan idinku aad ugu boorinayna barnaamij - ka Wondershare MobileTrans . Kaliya hal click, music oo dhan ayaa la koobiyeyn doonaa Galaxy Note 2. Waxay u egtahay weyn, sax? Download barnaamijkan oo raac talaabooyinka.
Tallaabada 1. Isku Galaxy Note 2 iyo qalab kale si ay u computer aad
Connect labada telefoonada in kombiyuutarka via fiilooyinka USB. Ka dib markii la ogaado, waxaad iyaga arki doonaa in uu furmo suuqa hoose. Sii Kaliya music saxday. Haddii aad tirtirto oo dhan music hadda aad Samsung Galaxy Note 2 oo kaliya lagu badbaadinayo kuwa ka phone kale, aad sax kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul .
Tallaabada 2. Transfer music in Samsung Galaxy Note 2 ka phone / kiniin
Guji Start Copy . Markaas, kala iibsiga music bilaabmin. U hubso in labada qalabka ku xiran yihiin inta lagu guda jiro oo dhan.
Taasi waa dhan oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan music inay Fiiro Galaxy 2. Hadda, hel jidka ugu aad rabto iyo samayn iibsiga music hadda.
Video waa ku saabsan sida loo wareejiyo music in Samsung Galaxy Note 2